Football Khabar » एइबारको पोस्टमा बार्सिलोनाद्वारा गोलको वर्षा : मेस्सी एक्लैले ठोके ४ गोल !
एइबारको पोस्टमा बार्सिलोनाद्वारा गोलको वर्षा : मेस्सी एक्लैले ठोके ४ गोल !
घरेलु लिगका पछिल्ला चार खेलमा लगातार गोलको खडेरीबाट गुज्रिएका कप्तान लिओनल मेस्सीले पाँचौं खेलमा एक्लैले ४ गोल हानेपछि बार्सिलोनाले ला लिगा फुटबलमा प्रभावशाली जित निलेको छ । शनिबार राति भएको लिगको २५औं खेलमा बार्सिलोनाले लिगको १६औं स्थानको एइबारलाई आफ्नो घरमा ५–० ले हरायो ।
बार्सिलोनालाई घरेलु मैदान क्याम्प नोउमा जिताउन कप्तान मेस्सी नायक बने । टोलीका ५ गोलमा उनले ३ गोल गरे । उनले पहिलो हाफको ४०औं मिनेटमा पुग्दा ह्याट्रिक पूरा गरेका थिए । यता, यसै खेलबाट बार्सिलोनामा डेब्यु गरेका नयाँ खेलाडी मार्टिन ब्रेथवेटले बेन्चबाट आएर पनि २ गोलमा असिस्ट गरे ।
घरेलु दर्शकमाझ बार्सिलोनाका लागि कप्तान मेस्सीले खेलको १४औं मिनेटमा पहिलो गोल गरेका थिए । इभान राकिटिकको पासमा एइबारका ४ जना डिफेन्डरलाई चलाखीपूर्वक छलाउँदै मेस्सीले हलुका प्रहारमा निकै सुन्दर गोल गरेका थिए ।
त्यसपछि खेलको ३७औं मिनेटमा मेस्सीले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गरे । अर्टुरो भिडालको पासमा मेस्सीले सो गोल पनि निकै सुन्दर ढंगले गरेका थिए । त्यसछि मेस्सीले ४०औं मिनेटमा आफ्नो ह्याट्रिक पूरा गरे । एइबारका डिफेन्डरले बार्सिलोनाका खेलाडीबाट बल खोसेर क्लियर गर्नेक्रममा गल्तीले मेस्सीको खुट्टामा परेपछि मेस्सीले सहजै बललाई जाली चुमाएपछि बार्सिलोना पहिलो हाफमा ३–० ले अघि रह्यो ।
त्यसपछि दोस्रो हाफमा बार्सिलोनाले २ गोल थप्यो । जहाँ खलको ८७औं मिनेटमा मेस्सीले नै टिमका लागि चौथो गोल हाने । सो गोलमा मार्टिनले नै भूमिका खेलेका थिए । त्यसपछि खेलको ८९औं मिनेटमा मार्टिनकै पासमा अर्थुरले गोल गरेपछि खेल बार्सिलोनाले ५–० ले जित्यो ।
यस खेलमा गरेको ४ गोलसँगै मेस्सीले जारी सिजन ला लिगामा कूल १८ गोल गरेका छन् । उनले यो सिजन समग्रमा देश र क्लबका लागि गरी कूल २५ गोल पूरा गरेका छन् ।
यो जितसँगै बार्सिलोना लिगको शीर्ष स्थानमा पनि चढेको छ । बार्सिलोनाको खातामा २५ खेलबाट ५५ अंक छ । तर, आजै राति दोस्रो स्थानको रियल मड्रिडले आफ्नो खेल खेल्ने हुँदा सो खेल जिते रियल पुनः शीर्ष स्थानमै चढ्नेछ ।
प्रकाशित मिति १० फाल्गुन २०७६, शनिबार २२:३९